'Shisheeyaha 5' Teas Ayaa Dib U Soo Celin Lahaa 'Sigourney Weaver's Ripley' - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Shisheeyaha 5aad' Teas Ayaa Dib U Soo Celin Lahaa Ripley Sigourney Weaver's
'Shisheeyaha 5aad' Teas Ayaa Dib U Soo Celin Lahaa Ripley Sigourney Weaver's
Waxa laga yaabaa inaanay “ciyaar dhaaf” u ahayn Alien xuquuqaha weli Sigourney Weaver ayaa shaaca ka qaaday in Walter Hill iyo David Giler labaduba ay qoreen daaweyn 50 bog ah oo uu Weaver haatan akhriyay.
Labada Hill iyo Giler labaduba waa wada shaqeyn muddo dheer ah Alien xayeysiinta oo ay diyaariyeen cutub cusub oo lagu saadaalin doono Sigourney Weaver oo ku laaban doona dabeecadda Lt. Ellen Ripley. Marka, bilaw inaad u ducayso ilaahyada Weaver ay jeceshahay waxa ay u aragto inay ku filan tahay inay ku soo noqoto doorka.
“Sigourney, sidii ay ku heshay bilowgii horeba, waa mid aad u xishood badan oo ku saabsan awooddeeda la xaqiijiyay ee ah inay ka jiido fikradda taas oo ah in la sheego sheeko cabsi gelinaysa surwaalka taariikhdaada, laad laada dameer cusub 'Xenomorph', isla markaana sameeya feker on labada caalamka ee Alien xayeysiinta iyo aayaha dabeecadda Lt. Ellen Ripley ”Hill ayaa u sheegtay Syfy Wire.
Wax soo saarka Brandywine wuxuu la wadaagay sawirka daaweynta sidoo kale. Jeldiga ayaa muujinaya astaamo cusub oo u qoran "Meel bannaan cidina kuma maqli karto riyadaada". Waa ciyaar iska cad oo sifiican loo qabtay oo ku qoran astaanta asalka ah ee filimka, "Meel bannaan cidina kuma maqli karto adiga oo qeylinaya".
Calaamadda cusub ee la soo saaray oo lagu daray labada xigashooyin ee Edgar Allan Poe iyo General William Tecumseh Sherman waa tilmaamo muuqda oo ku saabsan waxa dhici karaya.
General Sherman wuxuu caan ku ahaa ololihiisa dagaal ee koonfurta intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye. Hababkiisa waxay ahaayeen in la burburiyo oo la gubo wax kasta oo muuqda oo ka jira dhulka cadowga. Taasi miyey noqon kartaa tilmaam in Ripley uu wax la mid ah ku sameyn karo guriga Xenomorph? Hadday sidaas tahay, gebi ahaanba waan ku jiraa.
Waxaa laga yaabaa in ku riyoodka riwaayada Poe uu tilmaamayo qaybo ka mid ah xuquuqaha inay yihiin riyooyin. IE dhimashadeeda gudaha Alien 3 iyo qaabka kartuuniska ah ee Soobixinta shisheeyaha. Rikoodh ahaan, waan ku raaxaystaa dhammaan filimada.
Maxaad u maleyneysaa ragga Rajada Weaver ma ku lug leedahay mashruuca? Noo soo sheeg faallooyinka.
Xigasho: (SYFI WIRE)
shisheeyeAlien 5Lt. Ellen RipleySigourney WeaverWalter Hill
'Raaci Karaa' Miyay Noqon Kartaa Xiga Ciyaaraha-Beddelka Argagaxa? [Muuqaal Gaarka ah]
Filimmada ugu Fiican Shudderka sida ay ku qiimeeyeen khubaradu